China Production Type Generator mpanamboatra sy mpamatsy | Xinneng
Fehin-kodiarana: fanidiana: miaraka amin'izay koa ny rafitra fametahana ShouYaoShi azo itokisana sy ny interface frein, hiantohana ny fiarovana ny fiara.
Varavarana sy varavarankely: ny varavarana avaratra dia misy ivelan'ny varavarana, varavarana, varavarana roa ho an'ny mpiasa miasa.
Jiro: ny vatan-kazo ao anatiny mitsentsitra jiro ambony, manana toeram-piasana ary manana jiro birao miasa, mpiasa miasa mety.
Porofo mivaingana: famatsiana herinaratra ny vatan-kazo, varavarana hiandrasana ny haingon-trano roa sosona, ary ampiarahina amin'ny tabilao manintona feo, porofon-doha, firafitra mifototra, azo antoka sy azo antoka. A) ao anaty.
Ady amin'ny afo: fitaovana famonoana afo dia misy roa.
Ny karazana generator ny tranofiara dia manana endrika tsy manam-paharoa sy fanavaozana, fahaiza-manidina avo, foiben'ny gravité ambany, fanidiana azo antoka, endrika tsara tarehy ary tsara tarehy. Ny fampiasana ny ravina fampiatoana lohataona ravina dia mitombina, hery lehibe ary henjana tsara. Mora mihetsika ny tobin-herinaratra, azo ovaina ampiasaina, ary manana fiarovana sy fiarovana azo antoka. Izy io koa dia manana fitaovana vita amin'ny tanana, frein-driaka, jiro aoriana ary rafitra hafa, izay mahafeno ny fepetra takian'ny fiara fitaterana. Ampiasaina be amin'ny toerana fanamboarana, làlambe, fanamboaran-dalamby ary toerana vonjimaika izay ampiasana herinaratra.
1. Rafitra fampiatoana lohataona ravina; fitaovana amin'ny frezy fijanonana mekanika (frein-tanana) sy valin-drivotra mifamatotra amin'ny traktera;
2. Ilay tranofiara napetraka ho an'ny mpamorona dia manamboatra fehezan-tseho mitazona haavo haavo, izay mety amin'ny traktera misy haavo isan-karazany, miaraka amin'ny zoro mihodina lehibe ary azo fehezina ambony;
3. Ireo zoro efatra amin'ny frame dia misy fitaovana fanohanana mekanika, ny tranofiara dia misy sehatra fandidiana sy fikojakojana amin'ny lafiny telo, ary misy pedal amin'ny rambony.
①Traction: mandray hook hookable izy io, 180 ° turntable, familiana azo aleha ary fandidiana mety.
②Brake: Mandritra izany fotoana izany dia manana fantsom-panafody azo antoka sy rafitra fametahana tanana izy hiantohana ny fiarovana mandritra ny fiara.
③Tohana: Mba hiantohana ny fitoniana ny herinaratra mandritra ny fiasana dia ampiasana fitaovana mpanohana mekanika na hydraulic 4R izy io.
④Doar sy varavarankely: misy varavarankely misy rivotra eo aloha, varavarana eo an-damosiny, ary varavarana amin'ny lafiny roa ahafahan'ny mpandraharaha miditra sy mivoaka.
⑤Ny haben'ny boaty fiara: ny haben'ny boaty fiara dia voafaritra arakaraky ny voalaza. Afaka mandeha mandehandeha ny mpandraharaha, izay mety amin'ny fandidiana sy ny fikojakojana azy.
⑥Fisehoana: ny loko dia manana loko polyurethane polymer, ny loko dia azo alain'ny mpampiasa azy, ary ny fantsom-panafody dia mandany ny fivoahana ambony na ny setroka ambany mba hahazoana antoka ny fisehoany tsara tarehy. Ny endri-tsoratra sy ny haingon-trano eo ivelan'ny boaty fiara dia azo atao arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa.
⑦Fire: famonoana afo roa dia azo ampiasaina miaraka amin'ilay fiara. (Tsy voatery)
Teo aloha: Solar Panel
Manaraka: Volvo Generator Series